မြစ်ဆုံ Media Group: June 2016
အိုင်အက်စ်လက်မှ ဖော်လူဂျာကို သိမ်းပိုက်ပြီးနောက် မိုဆူးလ်သို့ ဆက်လက်ချီတက်ရန် အီရတ်စစ်တပ် ပြင်ဆင်
ဖော်လူဂျာမြို့ကို အောင်မြင်စွာ ပြန်လည် သိမ်းယူနိုင်ပြီးနောက် အီရတ်စစ်တပ်သည် အိုင်အက်စ်တို့ ထိန်းချုပ်ထားသည့် မိုဆူးလ်သို့ ဆက်လက်ချီတက်ရန် စီစဉ်နေကြောင်း သိရသည်။
ဘဂ္ဂဒက်မြို့ အနောက်ပိုင်း၊ အီရတ်နိုင်ငံ အလယ်ပိုင်းရှိ ဖော်လူဂျာသည် အိုင်အက်စ်တို့ စတင်အင်အားကြီးမားလာသည့် ၂၀၁၄ ခုနှစ်ကတည်းက အဆိုပါ နာမည်ဆိုးဖြင့် ကျော်ကြားသူ စစ်သွေးကြွများ လက်အောက်သို့ ကျရောက်နေခဲ့သည်။ အိုင်အက်စ်တို့သည် နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းရှိ အီရတ်၏ ဒုတိယ အကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်သော မိုဆူးလ်ကိုလည်း ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့သည်။
ပြီးခဲ့သည့် သီတင်းပတ် အတွင်းတွင် အီရတ်စစ်တပ်နှင့် မဟာမိတ် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များက ဖော်လူဂျာကို အောင်မြင်စွာ တိုက်စစ်ဆင် သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးနောက် မိုဆူးလ်သည် ဒုတိယ ပစ်မှတ် ဖြစ်လာမည်ဟု အီရတ် ဝန်ကြီးချုပ် ဟိုင်ဒါ အယ်လ် အေဘာဒီက ကြွေးကြော်ခဲ့သည်။ သို့သော် မိုဆူးလ်ကို တိုက်ခိုက်ရန်မှာ အီရတ်စစ်တပ်အတွက် ကြီးမားသည့် စိန်ခေါ်မှု တစ်ခုအဖြစ်လည်း ရှိနေသည်။
မိုဆူးလ်သည် ဖော်လူဂျာထက် ၁၀ ဆမျှ ပိုကျယ်ပြီး လူဦးရေကလည်း ၁၀ ဆမျှ ပိုများသည်။ တစ်ဖက်တွင် မိုဆူးလ်ကိုသာ သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပါက အိုင်အက်စ်တို့ကို အီရတ်မြေပေါ်မှ အပြီးတိုင် တွန်းလှန် တိုက်ထုတ်နိုင်ရန် သေချာသလောက် ရှိလာမည် ဖြစ်သည်။
အီရတ်စစ်ဦးစီးများက မိုဆူးလ်မြို့သိမ်း တိုက်ပွဲသည် ပိုမိုခက်ထန် ကြမ်းတမ်းနိုင်ကြောင်း ဝန်ခံထားပြီး လူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့များကလည်း မြို့နေလူထု အထိအခိုက် များမည်ကို စိုးရိမ်နေသည်။ ဖော်လူဂျာ မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွင် လေကြောင်းပစ်ကူ ပေးခဲ့သည့် အမေရိကန်က မြို့ကို သိမ်းယူပြီးချိန်တွင် ဝန်ကြီးချုပ် အေဘာဒီထံ ဆက်သွယ်ပြီး ဂုဏ်ပြုစကား ပြောကြားခဲ့သည်။
“အထူးသဖြင့် အေဘာဒီဟာ အရပ်သားတွေ ဘေးလွတ်ရာ တိမ်းရှောင်နိုင်ဖို့အတွက် လုံခြုံတဲ့ လမ်းကြောင်းတစ်ခု ဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့တာ ချီးကျူးရပါမယ်။ အီရတ်အစိုးရတပ်တွေဟာ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အတတ်နိုင်ဆုံး သတိထား ကိုင်တွယ်နေတယ်ဆိုတာ ဒီအချက်က သက်သေပြနေပါတယ်”ဟု အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြောရေးဆိုခွင့်ရ အရာရှိ မာ့ခ်တွန်နာက မှတ်ချက်ပေးခဲ့သည်။
အမေရိကန်သည် ပြီးခဲ့သည့် ၆ လအတွင်း ဒေသခံ တိုက်ခိုက်ရေး အင်အားစုများနှင့် ပူးပေါင်းကာ မိုဆူးလ်ရှိ အိုင်အက်စ် တပ်ဖွဲ့များ၏ ရိက္ခလာမ်းကြောင်းများကို ဖြတ်တောက်ရန် ကြိုးစားနေခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့် ဆီးရီးယားဘက်ရှိ အိုင်အက်စ် တပ်များက မိုဆူးလ်သို့ ရိက္ခာထောက်ပံ့နိုင်ခြင်း မရှိစေရန် လေကြောင်းမှ တိုက်ခိုက်နေကြောင်း သိရှိရသည်။
မြေပုံမဆွဲတတ်သော တပည့်နှင့် စီအိုစီဆော့သော ဆရာမ
တစ်ရက် ကျောင်းမှပြန်လာသောသားတော်မောင်က ကျောင်းတွင် သူတို့၏ ဆရာမက ကျောင်း သားများအား ပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်ထဲ ၌ ပါရှိသည့် ပထဝီဝင်မြေပုံများ ကို ရေးဆွဲခိုင်းထားပြီး သူကိုယ် တိုင်ကမူ ခုံတွင်ထိုင်ကာ စီအိုစီ (Clash of Clean)အင်တာနက် ဂိမ်းကစားနေကြောင်း သူ့အမေ ကို ပြောပြနေပါသည်။ စာရေးသူ ၏သားမှာ ကျောင်းကပြန်လာ သည်နှင့် လွယ်အိတ်ကိုချကာ ကျောင်းဝတ်စုံပင်မလဲဘဲ ဖုန်း ကောက်ကိုင်တတ်သူဖြစ်၏။ ယခုလည်း သူ့မိခင်က ဂိမ်းမဆော့ရန် ပြောသည်ကို ဆရာမလည်း ဆော့တာပဲဟူသော သဘောနှင့် ဆင် ခြေတက်နေခြင်းဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် မိုဘိုင်း ဆက်သွယ်ရေးကြောင့် စမတ်ဖုန်း များတွင် ကျယ်စွာအသုံးပြုလာ ကြပြီး နေ့စဉ်ဘဝ အချိန်ကာလ အချို့ကို စမတ်ဖုန်းဖြင့် ဖြုန်းတီး လာကြသည်။ အချို့က ဗဟုသုတနှင့် ပညာရှာမှီးရန် အသုံးပြုကြသော်လည်း အချို့မှာ ဂိမ်းကွန်ရက်တွင် နစ်မျောနေကြ၏။ သူငယ်ချင်းအချင်းချင်း လက်ဖက်ရည် ဆိုင် မျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင်နေ သော်လည်း စကားမပြောနိုင် ဂိမ်းဆော့သူကဆော့၊ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် ကြည့်သူကကြည့်နှင့်။ စကားပြောပြန်တော့လည်း ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ထဲက အကြောင်းအရာများသာ။ မိမိတို့၏ မိသားစုအကြောင်းအရာ များနှင့် ပညာ၊ အခွင့်အလမ်းများ သို့ မရောက်တော့ချေ။
မကြာမီကပင် ပုဂ္ဂလ်ိက သတင်းစာတစ်စောင်၌ သီဟ (စခန်းသစ်)၏ ကာတွန်းလက်ရာ ကိုဖတ်ရင်း ပြုံးရသေးသည်။ ဆေးရုံခုတင်ပေါ်၌ လူနာက ပက်လက်၊ ဘေးမှ စားပွဲခုံပေါ်တွင် စမတ်ဖုန်း ကိုတင်ကာ ဘက်ထရီအားသွင်း ထား၏။
လူနာက သူနာပြုဆရာမ ကို ပြောသော စကားမှာ ‘‘ခုတင် ပြောင်းလို့ရမလားဆရာမ ဒီနား က လိုင်းမမိလို့ပါ’’ဟူ၏။ ကာတွန်းဆရာများ သရော်ချင်စရာဖြစ်နေ ကြသည်။ လူတွင်ဖြစ်သော ရောဂါကို ဆရာဝန်ကကုသပေးနိုင်ကောင်းသော်လည်း ဖုန်းပွတ်သည့်ရောဂါကိုမူ ကုသရန်ခက်ခဲနေဦးမည်ဖြစ်၏။
ယခုစာသင်ခန်းထဲတွင် ဖုန်း ပွတ်နေသော ဆရာမကဲ့သို့ပင် အ လုပ်ခွင်အတွင်း အလုပ်နှင့်မဆိုင် သော ကိစ္စဖြင့် ဖုန်းပွတ်နေသော ဝန်ထမ်းများ များစွာရှိနေသည်။ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း အာရုံစူးစိုက် မှု မည်မျှရှိသည်ကို သူတို့၏ မိတ် ဆွေများက ဒေတာအချက်ပြမီး စိမ်းနေသည်ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် သိရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အလုပ်ခွင် အတွင်း အာရုံစူးစိုက်မှုအားနည်း ခြင်းသည် လုပ်ငန်းခွင်ထိခိုက်ရုံ သာမက မိမိနှင့်ပတ်သက်သော လူ့အဖွဲ့အစည်း၊ ထိုလူ့အဖွဲ့အ စည်းပေါင်းများစွာဖြင့် စုစည်း ထားသော တိုင်းပြည်အကျိုးစီးပွားအထိပါ နစ်နာစေသည်။ အနာ ဂတ် ခေါင်းဆောင်များကို မွေး ထုတ်ပေးနေသော စာသင်ခန်းများထဲတွင် တပည့်များအား ကျောင်းသို့ ဖုန်းယူမလာရဟုစည်းကမ်းချက်ထုတ်ပြန်ထားပြီး ဆရာ၊ ဆရာမ ကိုယ်တိုင်က အင်တာနက်ဖွင့်ကာ ဂိမ်းဆော့နေခြင်းသည် ဘယ်လိုမှမဖြစ်သင့်သော ကိစ္စတစ်ရပ်သာဖြစ်၏။
မျိုးဆက်သစ်များကို တိုး တက်ရစ်ဖို့ အစဉ်တစိုက်ဆုံးမသွန် သင်ခဲ့သော ကွယ်လွန်သူစာရေး ဆရာကြီး ဦးအောင်သင်းက ကျောင်းစာသင်ခန်းထဲရောက် နေသော ကလေးများအား စိတ် က ဟိုလွင့်ဒီလွင့် တခြားမှာရောက်နေလျှင် လူကကျောင်းမပြေး သော်လည်း စိတ်က ကျောင်းပြေး နေသဖြင့် ပညာရမည်မဟုတ် ကြောင်း ဆုံးမခဲ့ဖူးသည်။ ‘‘မင်းတို့ ဒီနေ့ခေတ် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတွေရဲ့ အကြီးဆုံးသော ချို့ ယွင်းချက်ကြီးကို ထောက်ပြချင် တယ်။ မင်းတို့တစ်တွေက စာသင်ခန်းထဲမှာ ဆရာ၊ ဆရာမသင်ပြ တာတွေကို ဂရုမစိုက်ချင်ဘူး။ ကျူရှင်တွေ၊ မှတ်စုစာအုပ်တွေကို အားကိုးလွန်းကြတယ်။ အဲဒီလို စာအုပ်စာတမ်းတွေကို အလွတ် ကျက်လိုက်ကြမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်မျိုး တွေထားတတ်ကြတယ်။ အဲဒါ ဟာ မင်းတို့ရဲ့ အသိပညာအ တွက်၊ မင်းတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ် အတွက် အလွန်ကို ကြီးမားတဲ့ အန္တရာယ်ကြီးတွေ ဖြစ်တယ်ဆို တာ နိုးနိုးကြားကြား သတိပြုကြ ပါလို့ အလေးအနက်သတိပေး လိုက်ချင်ပါတယ်’’ဟု ဆရာကြီး က ဆိုခဲ့သည်။
ယခု ကျောင်းစာသင်ခန်းထဲ တွင် တပည့်များကို မြေပုံဆွဲမပြ ဘဲ ပုံနှိပ်စာအုပ်ကြည့်ကာ ဆွဲစေ ပြီး ဂိမ်းဆော့နေသည့် ဆရာမ အား ဆရာကြီး၏ ပြောစကားအရ ဆိုရလျှင် လူက ကျောင်းမပြေး သော်လည်း စိတ်ကကျောင်းပြေး နေသည်လားဟု မေးခွန်းထုတ်ရ မလိုဖြစ်နေသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ တွင် ကျောင်းသားနှင့် ဆရာအချိုး မညီမျှမှုကြောင့် ဆရာများသည် စာသင်ခန်းထဲတွင် ကျောင်းသား ငါးဆယ်၊ ခြောက်ဆယ်ဦးလောက် ကို စာသင်ကြားနေရသည်။ ဖွံ့ဖြိုး ပြီးနိုင်ငံများမှ ဆရာများကတော့ စာသင်ခန်းထဲတွင် စာသင်သား နှစ်ဆယ်၊ အစိတ်ထက် ပိုမထား။ သင်္ချာတွက်နေသော၊ မြေပုံဆွဲနေ သော တပည့်များကို ဆရာက လိုက်လံကြည့်ရှုစစ်ဆေးနိုင်သည်။ ဘယ်နေရာက မှားနေတယ်၊ ဘယ်စာက သတ်ပုံမှားနေတယ် စသည်ဖြင့် ပြင်ဆင်ပေးနိုင်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာက စာသင် ခန်းကျဉ်းကျဉ်းထဲတွင် စာသင် သားက အပြည့်ဖြစ်နေ၍ ဆရာ က ရှေ့နောက်လိုက်မကြည့်နိုင်။ ဆရာသင်ကြားချက်ကိုပင် တပည့်တွေက မနည်းအာရုံစိုက် နား ထောင်နေရ၏။ ထို့ကြောင့်ပင် ရှေ့ဆုံးတန်းလုသော ပြဿနာ တွေဖြစ်လာရ၏။ ဆရာ၊ ဆရာမ အားလုံးကို ဝါးလုံးရှည်နဲ့ ပတ်ယမ်းလိုခြင်းတော့ မဟုတ်။ စာသင်ချိန်တွင် တယ်လီဖုန်းစက် ပိတ်ထားသော၊ အသံတိတ်ထား သော ဆရာ၊ ဆရာမ များစွာရှိကြောင်းကိုလည်း သတိပြုမိပါသည်။ သို့သော် ငါးခုံးမတစ် ကောင်ကြောင့် တစ်လှေလုံးပုပ်ရသကဲ့သို့ မိမိကြောင့် အခြားသူများပါ လက်ညှိုးထိုးခံရမည့်အဖြစ်မျိုး ကိုလည်း မဖြစ်စေလိုပါ။
ကျောင်းတွင် စာသင်သည့် ဆရာကိုယ်တိုင်က သင်ကြားရေး တွင် အာရုံမစိုက်လျှင် ကျောင်း သားများကလည်း ဘာသာရပ် များကို နားလည်နိုင်မည်မဟုတ်။ ကျောင်းတွင် စာမလိုက်နိုင်တော့ ကျူရှင်ပြေးရသည်။ ကျူရှင်များ ပေါ်ပေါက်တွင်ကျယ်လာရခြင်း ၏ အကြောင်းရင်းသည် ကျောင်း သားများဘက်ကချည်းမဟုတ်။ သင်ကြားသူနှင့် သင်ယူသူနှစ်ဦး စလုံး အာရုံစူးစိုက်မှုရှိမည်ဆိုလျှင် ဘာသာရပ်တစ်ခုကို ဟိုဆရာ၊ ဒီ ဆရာနှင့် နှစ်ခါထပ်သင်စရာမလို ဟု ထင်ပါသည်။
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က ထိုင်းရောက်တက္ကသိုလ်ဆရာ၊ ဆရာမများ၊ ကျောင်းသားများနှင့် တွေ့ဆုံစဉ် ကျူရှင်စနစ်နှင့်ပတ် သက်၍ တစ်ချိန်က မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပညာရေးစနစ်တွင် ကျူရှင်ပေး ခြင်းများမရှိခဲ့ဘဲ ကျူရှင်ယူသူများ သည် အင်မတန်မှ ညံ့ဖျင်းသူများ ဖြစ်ပြီး ရှက်စရာအလွန်ကောင်း ကြောင်း ထည့်သွင်းပြောကြား သွားသည်။ ဟုတ်၏။ စာရေးသူ တို့ငယ်စဉ်က ကျူရှင်တက်သူများ မှာ စာမလိုက်နိုင်သောသူများသာ ဖြစ်ပြီး မလိုက်နိုင်သော ဘာသာ ရပ်များကိုသာ သင်ယူလေ့ရှိ သည်။ ယခုတော့ မြန်မာစာက အစ ဘာသာစုံကျူရှင်ယူနိုင်သူက ဂုဏ်ရှိနေသလို ဖြစ်နေ၏။ အိမ် မှာ စာမကျက်၊ သင်္ချာမတွက် သောသူများကို စာကျက်ဝိုင်းသို့ ဂိုက်ငှားကာ ပို့ထားရ၏။ ထိုအ တွက်လည်း ဂုဏ်ယူသူက ယူနေ ကြ၏။
ဗြိတိသျှနန်းရင်းဝန် ဒစ္စရေ လီက ‘‘နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ ကလေး များအကြောင်း ကျုပ်ကိုပြောပြ ပါ။ အဲဒီနိုင်ငံရဲ့ အနာဂတ်ကို ဟောကိန်းထုတ်မယ်’’ဟု ဆိုခဲ့ဖူး သည်။
ယခုမြန်မာနိုင်ငံ၏ အစိုးရ သစ်မှ ပြောင်းလဲချိန်တန်ပြီဟူ သော စကားနှင့်အညီ ပညာရေး အပါအဝင် ကဏ္ဍအားလုံးကို ပြောင်းလဲမှုပြုလုပ်နေပြီဖြစ်သည်။ အမြစ်တွယ်နေသည့် ကျူရှင်စနစ် ကို ပြောင်းလဲမည်ဆို၏။ အဆင့် မြင့်ပညာဥပဒေရေးဆွဲကာ တက္က သိုလ်ကောလိပ်များကို မြှင့်တင် မည်ဆို၏။ ဟိုနေရာတစ်တို့၊ ဒီနေ ရာတစ်တို့မလုပ်ဘဲ စီမံကိန်းရေး ဆွဲကာ ပြုလုပ်သွားမည်ဆို၏။
ပြောင်းလဲမှု၏ အသီးအပွင့် များကို ရရှိခံစားရမည်မှာ မြန်မာ နိုင်ငံသားများနှင့် ၎င်းတို့၏ ရင် သွေးငယ်များသာ ဖြစ်သည်။ မစ္စ တာဒစ္စရေလီအား မြန်မာနိုင်ငံက ကလေးများ မြေပုံဆွဲတော် ကြောင်း သူတို့ကို သင်ပြပေး သော ဆရာ၊ ဆရာမများမှာလည်း သင်ကြားမှုတွင် အာရုံစူးစိုက်ကြ ကြောင်း မကြာမီပြောပြနိုင်ပါစေ ဟူ၍သာ။
အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင် ပြင်ဖွဲ့ပါ
ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ် ဦးဆောင်အဖွဲ့နှင့် တွေ့ဆုံပွဲတွင် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရှင်းလင်းပြောကြားစဉ် (ဓာတ်ပုံ-ဇေယျာထွန်း)
၂၀၁၅ ခုနှစ် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲအလွန် ပြည်ထောင်စု အစိုးရသစ်၊ လွှတ်တော်သစ်များသည် တည်ဆဲဥပဒေအား ပြင်ဆင်လျက်၊ မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်ကို အားကောင်းမောင်းသန် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းနိုင်မှသာ လာမည့်ငါးနှစ်သက်တမ်းတွင် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုများစွာကို ထိထိရောက်ရောက် ချဉ်းကပ် အဖြေရှာနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ အစိုးရသစ်၊ လွှတ်တော်သစ်များသည် မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်ကို အမြန်ဆုံး ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းကာ တိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုကို အပြောသက်သက်မဟုတ်၊ အလုပ်နှင့်သက်သေပြု၊ မျက်နှာမူမည့် လူ့အခွင့်အရေးယန္တရားသစ်ကို ထူထောင်ကြရမည်ဖြစ်သည်။
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည် ၂၀၁၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၅ ရက်တွင် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါ နိုင်ငံသားများ၏ မူလအခွင့်အရေးများကို မြှင့်တင်ရေးနှင့် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးတို့ကို ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အလို့ငှာ မြန်မာနိုင်ငံ၊ အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ကို အဖွဲ့ဝင် ၁၅ ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ် မတ် ၂၈ ရက်တွင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်ဥပဒေကို အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်ဥပဒေ၊ ပုဒ်မ ၄ နှင့် ပုဒ်မ ၉ ပါပြဋ္ဌာန်း ချက်များအရ၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတဟောင်း ဦးသိန်းစိန်သည် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်း သူရဦးရွှေမန်း၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်း ဦးခင်အောင်မြင့်တို့နှင့် ညှိနှိုင်း၍ ၂၀၁၄ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂၄ ရက်တွင် ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ အပါအ၀င် အဖွဲ့ဝင် ၁၁ ဦးပါဝင်သော မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ကို ဖွဲ့စည်းတာဝန် ပေးအပ်ခဲ့သည်။ လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်သည် အစိုးရအကြီးအကဲဟောင်း၊ လွှတ်တော်အကြီးအကဲဟောင်းများက ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်နေသည်မှာ အစိုးရသစ်နှင့်လွှတ်တော်သစ်တို့အတွက် အခက်တွေ့ဖွယ်ရာပင် ဖြစ်သည်။
၂၀၁၁ ခုနှစ် အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်နှင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ် အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်တို့၏ ဖွဲ့စည်းခြင်းကို နှိုင်းယှဉ်သုံးသပ်မည်ဆိုလျှင် ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌနေရာသည် အပြောင်းအလဲ မရှိခဲ့ပေ။ သံအမတ်ကြီးဟောင်း ဦးဝင်းမြသည် ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌနေရာကို ၂၀၁၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၅ ရက်ကတည်းက တာဝန်ယူလျက်ရှိသည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ် အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် အတွင်းရေးမှူး ဦးစစ်မြိုင် (အငြိမ်းစား ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန)သည် ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းသော ကော်မရှင်တွင် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်လာသည်။ ဒေါက်တာဥာဏ်ဇော် (အငြိမ်းစား ပြည်နယ်ဆေးရုံအုပ်ကြီး)၊ ဒေါက်တာဒေါ်သန်းနွဲ့ (အငြိမ်းစား ပါမောက္ခ၊ ဥပဒေပညာဌာန)၊ ဦးခင်မောင်လေး (အငြိမ်းစား ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ အလုပ်သမားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန) နှင့် ဦးညွန့်ဆွေ (အငြိမ်းစား ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန) တို့သည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်ကော်မရှင်တွင် အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် ပြန်လည် ပါဝင်လာသည့် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်သည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ် ကော်မရှင် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်တင့်ဆွေ (အငြိမ်းစား သံအမတ်ကြီး) သည် ၂၀၁၆ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့တွင် နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိလ်ရုံး ၀န်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဖြစ်လာသည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်ကို အသစ်ပြင်ဆင် ဖွဲ့စည်းလင့်ကစား၊ ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ အပါအ၀င် အဖွဲ့ဝင် ခြောက်ဦးသည် ကော်မရှင်ဟောင်းမှ လူဟောင်းများဖြစ်ပြီး၊ အဖွဲ့ဝင်သစ် ငါးဦးသာ ထည့်သွင်းဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီး ဖွဲ့စည်း တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့သည့် ကော်မရှင်သည် အသွင်သဏ္ဌာန်နှင့် အနှစ်သာရအားဖြင့် ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့သော လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်နှင့် ထူးမခြားနားပင် ဖြစ်သည်။ ၀ိုင်ခွက်အဟောင်းနှင့် ၀ိုင်အဟောင်းပင် ဖြစ်သည်။ အစိုးရမဟုတ်သော၊ လွတ်လပ်သည့် အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် ရပ်တည်နိုင်မှုအပိုင်းတွင် အလွန်အမင်း အားနည်းနေဆဲဖြစ်သည်။ ပြည်တွင်းရှိ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ၊ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာအ ဖွဲ့အစည်းများနှင့် ထိထိရောက်ရောက် ပူးပေါင်းလက်တွဲလျက်၊ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အသိပညာပေးမှု၊ လူ့အခွင့်အရေး ဖောက်ဖျက်မှုများကို စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၊ လူ့အခွင့်အရေး ဖောက်ဖျက်မှုများကို စီမံချက်များ ချမှတ်လျက် ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်မှု စသည့်အပိုင်းကဏ္ဍများတွင် အားကောင်းမောင်းသန် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် လိုအပ်နေဆဲဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ် နှင့် ၂၀၁၁ ခုနှစ်ဟု နှစ်ကာလ ခြားနားလင့်ကစား၊ အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်၏ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ပတ်သက်၍ မြင့်မြင့်မားမား မျှော်မှန်းနိုင်ခြေ မရှိသည့်အလျောက်၊ လက်ရှိကော်မရှင် ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံနှင့်ဆိုလျှင် လက်ရှိအစိုးရနှင့် လွှတ်တော်သက်တမ်း၌ လူ့အခွင့်အရေး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၊ နိုင်ငံသားများ၏ မူလအခွင့်အရေးများကို မြှင့်တင်ရေး၊ လူ့အခွင့်အရေး အသိပညာပေးမှု မြှင့်တင်ရေး အပါအ၀င် ကိစ္စရပ်ကြီးများတွင် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာ သိသာမြင်သာသည့် တိုးတက်မှုများ၊ အပြောင်းအလဲများ ဖြစ်လာနိုင်စရာ အလားအလာ နည်းသည်ဟု ကောက်ချက်ပြုနိုင်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၃ အရ၊ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်၏ ရာထူးသက်တမ်းသည် ငါးနှစ်ဖြစ်သည့်အလျောက် သမ္မတဦးသိန်းစိန်လက်ထက် ဖွဲ့စည်း တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့သော မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်များသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၂၃ ရက်မှသာ သက်တမ်း ကုန်ဆုံးမည်ဖြစ်သည်။ ဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များအရ ရွေးကောက်ပွဲအလွန် အစိုးရသစ်သည် အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်ကို ကြိုက်သည်ဖြစ်စေ၊ မကြိုက်သည်ဖြစ်စေ ဆက်လက်ခံထားရမည့်သဘော သက်ရောက်နေသည်။ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်တွင် အစိုးရနှင့် မပတ်သက်သူများ၊ အစိုးရအရာရှိဟောင်း မဟုတ်သူများ၊ အရပ်ဘက် လူမှုအဖွဲ့အစည်းဝင်များ၊ ပညာရှင်များ၊ အထူးသဖြင့် ဥပဒေပညာရှင်များကို အများစု ထည့်သွင်းဖွဲ့စည်း နိုင်မည်ဆိုလျှင် ပိုမိုသာလွန်ကောင်းမွန်မည် ဖြစ်သည်။
ဥပဒေပါ သက်တမ်းသတ်မှတ်ချက်သည် ပြဿနာမဟုတ်သော်လည်း၊ ယခင်အစိုးရဟောင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ကို အစိုးရနှင့်နီးစပ် ပတ်သက်သူများနှင့် မဏ္ဍိုင်ပြုဖွဲ့စည်းခဲ့သည်က စိန်ခေါ်မှုဖြစ်နေသည်။ လက်ရှိအမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်များ အားလုံးသည် ဗြူရိုကရက်ဟောင်းများ သို့မဟုတ် အငြိမ်းစား အစိုးရအရာရှိများဖြစ်သည်။ ဥပဒေပညာရှင်ဟု သတ်မှတ်နိုင်မည့် ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ဦးရေမှာ နှစ်ဦး၊ သုံးဦးသာဖြစ်ပြီး၊ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် အားလုံးနီးပါးသည် အစိုးရဟောင်း၏ အမာခံများဖြစ်နေသည်ဟု အလွတ်သဘော၊ ကောက်ချက်ပြု၊ သုံးသပ်နိုင်သည်။
၂၀၁၁ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ်တို့တွင် ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခဲ့သော အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်များသည် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေပါ နိုင်ငံသားများ၏ မူလအခွင့်အရေးများကို မြှင့်တင်ရေးနှင့် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးတို့ကို ထိထိရောက်ရောက်၊ ထွင်းထွင်းဖောက်ဖောက် ဆောင်ရွက်နိုင်မှုအပိုင်း တွင် အားနည်းခဲ့သည်မှာ အထင်အရှားဖြစ်သည်။ တိုင်းရင်းသား ပြည်သူလူထုအများစု အနေဖြင့် လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ကို အားကိုးအားထား ပြုလောက်သည်အထိ အားကောင်းမောင်းသန် မရှိခဲ့သည်မှာ ပကတိ အနေအထားပင်ဖြစ်သည်။ ကော်မရှင်သည် လူ့အခွင့်အရေး ဖောက်ဖျက်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ သီးခြားလွတ်လပ်စွာ စုံစမ်းစစ်ဆေး၊ ဖော်ထုတ်နိုင်မှုအပိုင်းတွင်လည်း အားနည်းချိနဲ့နေဆဲ ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီ အကူးအပြောင်း ကာလတွင် လူ့အခွင့်အရေး ဖောက်ဖျက်မှု အများအပြားရှိနေသည်မှာ ငြင်းမရသောအချက်ပင် ဖြစ်သည်။ ကော်မရှင်အနေဖြင့် လူ့အခွင့်အရေးဖောက်ဖျက်မှုများကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် စနစ်တကျ စုံစမ်းစစ်ဆေး၊ ဖော်ထုတ်နိုင်ရန် ထိုးထိုးဖောက်ဖောက် ဆောင်ရွက်နိုင်မှသာ လူ့အခွင့်အရေး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့် မူလအခွင့်အရေးများ မြှင့်တင်ရေးကိစ္စများသည် ပိုမိုထိရောက် အလုပ်ဖြစ်လာနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ၊ သတင်းမီဒီယာများနှင့် ဗျူဟာမြောက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မှု အပိုင်းကို လည်း ပိုမိုချဲ့ထွင်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် လိုအပ်နေဆဲဖြစ်သည်။
သို့ဖြစ်၍ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ဥပဒေကို ပြန်လည်သုံးသပ်၊ ပြင်ဆင်နိုင်ရေး ဦးစားပေးဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်း တိုက်တွန်းဆော် သြလိုပါသည်။ အထူးသဖြင့် အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်၏ သက်တမ်းသတ်မှတ်မှုကို အလေးအနက်ထား သုံးသပ်စဉ်းစားသင့်သည်။ အခန်း ၄၊ ပုဒ်မ ၁၃ ပါ ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်၏ ရာထူးသက်တမ်းသည် ငါးနှစ်ဖြစ်သည်ဟူသော ပြဋ္ဌာန်းချက်မျိုးကို ပြန်လည် ပြင်ဆင်သင့်သည်။ အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ကို အစိုးရ၏သြဇာ၊ ပတ်သက်မှု ကင်းကင်း၊ လွတ်လွတ် လပ်လပ် ဖွဲ့စည်းနိုင်လေ၊ ကောင်းလေဖြစ်သည်။ တိုင်းသိပြည်သိ၊ လူရိုသေရှင်ရိုသေ ပြည်သူကိုမျက်နှာမူလေ့ ရှိသည့် အဖွဲ့ဝင်များနှင့် ဖွဲ့စည်းသည့်ကော်မရှင် ဖြစ်မည်ဆိုလျှင် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ကော်မရှင်၏သက်တမ်းသည် ငါးနှစ်ဖြစ်ဖြစ်၊ ဆယ်နှစ်ဖြစ်ဖြစ် သတ်မှတ်၍ ရသော်လည်း ကော်မရှင်ကိုစဖွဲ့ကတည်းက အစကောင်းဖို့ အရေးကြီးသည်။ လက်ငင်းမြန်မာ့နိုင်ငံရေး အခင်းအကျင်းအရ၊ မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်၏ သက်တမ်းသည် အစိုးရ၏သက်တမ်းအတိုင်း ဖြစ်သည်ဟု သတ်မှတ်ခြင်းက ပိုမိုကြောင်းကျိုးဆီလျော်မည် ဖြစ်သည်။ ဥပဒေပညာရှင်များကို ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်နေရာအများစုတွင် ပါဝင်ခွင့်ပြုရေးကိုလည်း ဥပဒေ၌ ထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းထားနိုင်မည်ဆိုလျှင် ပိုမိုအားကောင်းမောင်းသန်စေမည်ဖြစ်သည်။ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် များနေရာတွင် ပြည်သူလူထုအကျိုးကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ မျက်နှာမူနိုင်သူ၊ အဂတိတရားကင်းသူ၊ လူရိုသေ ရှင်ရိုသေဖြစ်သူများကို ရွေးချယ်တာဝန်ပေးနိုင်ရေး လမ်းဖွင့်ပေးမည့် ပြဋ္ဌာန်းချက်များကိုလည်း ဥပဒေတွင် ပြင်ဆင်၊ ထည့်သွင်းသင့်သည်။
အချုပ်အားဖြင့်ဆိုသော် လူ့အခွင့်အရေး မှတ်တမ်းများ ဆိုးဆိုးရွားရွားရှိခဲ့သော မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းစ၊ စပ်ကူးမပ်ကူးကာလ၌ လူ့အခွင့်အရေး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့် နိုင်ငံသားများ၏ မူလအခွင့်အရေးမြှင့်တင်ရေးတို့ကို ဆောင်ရွက်မည့် လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်သည် အစိုးရမဟုတ်သော၊ လွတ်လပ်သော၊ ဘက်မလိုက်သော၊ တိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုကို မျက်နှာမူသော ယန္တရားစစ်စစ်ဖြစ်မှသာ အစိုးရသစ်၊ လွှတ်တော်သစ်များနှင့်ပလဲနံပ သင့်မည်ဖြစ်သည်။ လာမည့် ငါးနှစ်တာကာလတွင် လူ့အခွင့်အရေး အဆင့်အတန်း ပိုမိုမြင့်တက်လျက်၊ လူ့အခွင့်အရေး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုများကို စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာ ဦးဆောင်နိုင်ရေး ရှေးရှုမည်ဆိုပါက ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်ပြဋ္ဌာန်းလျက်၊ မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်သစ်ဖွဲ့စည်းနိုင်ရေး အလျင်အမြန် ဖော်ဆောင်သင့်ပါကြောင်း မီးမောင်းထိုး တိုက်တွန်း ဆော်သြလိုက်ရပါသည်။
ဦးခေါင်းမှာ ပေါက်တူးနဲ့ ထုတဲ့ ဒါဏ်ရာအပြင် ဓားဒါဏ်ရာများ ပါတွေ့ရှိရတဲ့ လူသတ်မှု
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ရေတာရှည် မြို့နယ် မြို့လှမြို့ အရှေ့တောင် ဘက် ၃ မိုင်ခန့် အကွာ ဆည် မြောင်းဘောင်အနီးမှာ တစ်ရပ် တည်းသားချင်း ဝိုင်းဖွဲ့ အရက် သောက်စားကြရာက စကားများ ရန်ဖြစ်ကာ လူသတ်မှုတစ်ခု ဇွန်လ ၂၉ ရက်နေ့ ဖြစ်ပွားခဲ့ပါ တယ်။
သေသူက ကျွန်းပင်စု ရွာနေ ဦးထွန်းလှ ၆၈ နှစ်ဖြစ်ပြီး ဦးခေါင်းမှာ ပေါက်တူးနဲ့ ထုတဲ့ ဒါဏ်ရာအပြင် ဒါးဒါဏ်ရာများ ပါတွေ့ရှိရတဲ့အတွက် နယ်ထိန်း ခေါင်းဆောင် ရဲအုပ် သန့်ဇော် ဟိန်း နှင့်အဖွဲ့က ပြစ်မှုကျူးလွန် သူကိုစုံစမ်းခဲ့ပြီး ဒီကနေ့ မနက် ပိုင်း ၁၀ နာရီခွဲ အချိန်က စစ် တောင်းမြစ်အရှေ့ဘက်ကမ်း ဘူးအိုင်ရွာ နဲ့ သဲကောကျေးရွာ ကြားမှာ ဖမ်းမိပါတယ်။
ပြစ်မှုကျူး လွန်သူသူနှစ် ယောက်ဟာ ဒေါင်းနန်းကျ ကျေးရွာ နေသူများဖြစ်ပြီး မြို့လှနယ်မြေ ရဲစခန်းအပိုင်မှာ တစ်လအတွင်း ဒုတိယမြောက် လူသတ်မှုဖြစ် ပါတယ်။
မြန်မာငွေ ကျပ် ၃၀၀၀ ကျော်နဲ့ရောင်းချမည့် စမတ်ဖုန်း အိန္ဒိယတွင် မကြာမီဖြန့်ချိမည် ======= ====== ======= ====== =======
ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဈေးအချိုဆုံး ပေါင်စတာလင် ၃ ပေါင်နှင့် ရောင်းချမည့်
စမတ်ဖုန်းကို ယခုသီတင်းပတ်အတွင်း စတင်ဖြန့်ချိတော့မည်ဟု သိရသည်။
အဓိကအားဖြင့် ဆင်းရဲသားအများစုရှိသော အိန္ဒိယကဲ့သို့ နိုင်ငံများကိုအဓိက
ရည်ရွယ်ပြီး ထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည် ဟုသိရသည်။
အိန္ဒိယရှိ သန်းပေါင်းများစွာသော လူထုအတွက် အင်တာနက်ဆက် သွယ်မှုရရှိစေရန်ရည်ရွယ်ပြီး Freedom 251 ဟု အမည်ပေးထားသော ယင်းစမတ်ဖုန်းကို ဇွန်လ ၃၀ ရက်နေ့စတင် ရောင်းချပြီး အိန္ဒိယ၌ ကြိုတင်မှတ်ပုံတင်ထားသူများကိုသာ ရောင်းချပေးမည်ဟု ဆိုသည်။
ယင်းကိရိယာကို Noida အခြေစိုက် Ringing Bells ကုမ္ပဏီက ထုတ်လုပ်ထားပြီး ပထမအသုတ် ထုတ်လုပ်တင်ပို့ရောင်းချရာတွင် အလုံးရေ ၂၀၀,၀၀၀ ကျော်သာ ရောင်းချနိုင်မည်ဟု သိရသည်။
ယင်းစမတ်ဖုန်းသည် လေးလက်မမျက်နှာပြင်အကျယ် ပါရှိပြီး၊ 8 megapixel အနောက်ကင်မရာနှင့် 3.2 megapixel အရှေ့ ကင်မရာ၊ Storage 8GB ၊ RAM 1 GB တို့ ပါရှိသည်။
Facebook ,You Tube, Google Play WhatsApp စသည်တို့ အသင့်သုံးနိုင်ရန် ထည့်သွင်းထားပြီး အဖြူရောင်နှင့် အနက်ရောင်ကိုယ်ထည်များဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသည်။
အဆိုပါစမတ်ဖုန်းသတင်းကို ပြီးခဲ့သော ဖေဖော်ဝါရီလက စတင်ကြေညာခဲ့ရာ၌ ယင်းကုမ္ပဏီ၏ ၀က်ဘ်ဆိုက်တွင် လူပေါင်း ၇ သန်းက ကြိုတင်မှတ်ပုံတင်ခဲ့ကြရာမှ ၀က်ဘ်ဆိုက် crash ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက် ရောင်းချမှုကို ခေတ္တရပ်ဆိုင်းခဲ့ရသည်။
လိုင်စင်မဲ့ယာဉ်များကို ဖမ်းဆီးအရေးယူမည်ဖြစ်ကြောင်း ကချင်ပြည်နယိ၊ အစိုးရအဖွဲ့ရုံးမှ ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးဇော်မျိုးညွှန့်က ပြောကြား
ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ညွှန်ကြားချက်အရ လိုင်စင်မဲ့ယာဉ်များကို ဖမ်းဆီးအရေးယူမည်ဖြစ်ကြောင်း ကချင်ပြည်နယိ၊ အစိုးရအဖွဲ့ရုံးမှ ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးဇော်မျိုးညွှန့်က ပြောသည်
နုတ်ထွက်စေချင်ကြပါက နုတ်ထွက်ပေးသွားမည်ဟု မန္တလေးမြို့တော်ဝန် ပြောကြား
မန္တလေးမြို့တော်ဝန် အဖြစ်က ၄င်းအား နုတ်ထွက် စေချင်ကြပါက နုတ်ထွက်ပေးသွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ မြို့တော်ဝန် ဒေါက်တာရဲလွင်က ဇွန်လ ၂၉ ရက်နေ့က စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ ရုံးခန်းမှာ ပြုလုပ်တဲ့ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲမှာ သတင်း မီဒီယာတွေကို ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
မီးလောင်ခဲ့တဲ့ မင်္ဂလာဈေး အဆောက်အအုံကို ဖြိုဖျက်ကာ အသစ် တည်ဆောက်မယ့်အပေါ် ဈေးသူ ဈေးသားတွေက မြို့တော်ဝန် ဖြုတ်ချပေးရေး ကြွေးကြော်ချက် အပါအ၀င် အချက် ခြောက်ချက်နဲ့ ဆန္ဒ ထုတ်ဖော်မှာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မြို့တော်ဝန် ဒေါက်တာ ရဲလွင်က သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ ခေါ်ယူပြုလုပ်စဉ် ပြောကြားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၀ တန်းကျောင်းသူလေးတစ်ဦး ဘဝကို အရှုံးပေးသွား --------------------------------------------------------------------------
မွန်ပြည်နယ် ရေးမြို့ အပေါ်ကျုံးတွင် ဘ၀ကိုအရှုံး ပေးလိုက်သော ၁၀ တန်းကျောင်းသူလေး အမျိုးသမီး အလောင်းတစ်လောင်း ပေါ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ကိုရင်လေး ပုပ္ဖ၀တီကျေးရွာနေ ကိုဇော်မိုး+မစိုးသီတာ တို့၏ သမီး ယခု ၁၀ တန်းကျောင်းသူလေး မယွန်းယွန်း ဟု သိရှိရပါသည်။ ဒီနေ့ မနက် ၄း၀၀ အချိန် အိမ်မှ ထွက်သွားပြီး အခုလို ဘ၀ကို အရှုံးပေးလိုက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရပါသည်။
Photo ကိုမင်း/Ko Kyaw Naing
ဆိုင်ကယ် မောင်းကျွမ်းပါသည်ဟုသော စတန့်မင်းသားတွေသနားတယ် ဆိုင်ကယ်ဖြင့် အုန်းကောက်ညှင်းပေါင်း လိုက်ရောင်းတဲ့ စစ်ကိုင်းတောင်ရိုးပေါ်က ဈေးသယ်အမျိုးသမီး။
ဆိုင်ကယ် မောင်းကျွမ်းပါသည်ဟုသော စတန့်မင်းသားတွေသနားတယ်
ဆိုင်ကယ်ဖြင့် အုန်းကောက်ညှင်းပေါင်း လိုက်ရောင်းတဲ့ စစ်ကိုင်းတောင်ရိုးပေါ်က ဈေးသယ်အမျိုးသမီး။
ယခုပြဿနာကို အတွင်းကျကျမကြည့်လျှင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေက မွစ်စလင်တွေကို ဖိနှိပ်ရက်စက်တယ်လို့သာမြင်ကြရမှာပါပဲ။ရဲအစီရင်ခံစာမှာ အိမ်ခြေထောင်ကျော်ရှိတဲ့ရွာမှာ မွစ်စလင်မိသားစု ၄၄စုရှိတယ်လို့ဖော်ပြတယ်။ ဗလီကတော့ ၂လုံးတဲ့။
ရွာတစ်ရွာမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတစ်ခုတည်ဆောက်မယ်ဆိုရင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အိမ်ထောင်စု ၅၀နဲ့အထက်ရှိမှ သာသနာရေးကတည်ဆောက်ခွင့်ပေးတယ်။ သူရဲသမိန်ရွာမှာ မွစ်စလင်အိမ်ထောင်စု ၄၄စုသာရှိတာ ဗလီက ၂လုံးဆိုတော့ ဘယ်သူကဆောက်လုပ်ခွင့်ပေးတာလဲဆိုတာနဲ့၊ တရားဝင်ဗလီဟုတ်မဟုတ် အရင်ဖြေရှင်းဖို့လိုပါတယ်။ ။
ဘုန်းကြီးလူထွက် ငှားချင်လို့ပါ ------------------------------------------
အသက်ကြီးမှ အထုအထောင်းခံချင်နေတာ :P
"ဆရာတော် အပြင်မှာ ဧည့်သည်ရောက်လို့ပါဘုရား''
ဒီနေ့ နေ့ခင်း (၂) နာရီလောက်က အခန်းထဲမှာ စာကြည့်နေတုန်း ကျောင်းသားလေး လာပင့်လို့ ဧည့်ခန်းထဲကို လိုက်လာပါတယ်။
ဧည့်ခန်းထဲရောက် အသက်(၇၀)ကျော်အရွယ် ဒကာမကြီးတစ်ဦးနဲ့ အဖော်ဒကာတစ်ဦးကို တွေ့ရပါတယ်။
တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒူးခေါင်းနားထိတိုတဲ့ ဂါဝန်စကပ် အင်္ကျီကလည်းကြောင်ကြောင်ကြားကြားနဲ့
´´ဘင်လာဒင် ပုတီးကိုင်သလို'' အကြည့်ရ အတော်ဆိုးလှပါတယ်။
စာရေးသူကိုတွေ့တော့ ပေါက်စိန်ပေါက် ဦးချပြီး
''ပြောပါ ဒကာမကြီး ကူညီနိုင်တဲ့ဟာဆို အားလုံးကူညီပါ့မယ်''
''ပြောကို မပြောချင်ပါဘူး အိမ်ကမျက်နုကြိုက်ကြီးပေါ့ဘုရား''
''မျက်နုကြိုက်ဆိုတာ ဘာကိုပြောတာလည်း ဒကာမကြီးရဲ့''
'' ရော် ဘုန်းကြီးရယ် ရိုးပ၊ နွားအို မျက်နုကြိုက်ဆိုတဲ့ စကားရှိတယ်လေ၊ တပည့်တော်အိမ်ကဟာကြီးက အသက်(၇၁)နှစ်ရှိပြီးဘုန်းဘုန်းရေး ခုသူက သူ့ထက်အသက်တအားငယ်တဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်နဲ့ ဘာညာသာရကာ နေကြာကွာစေ့ မရိုးမသား ခိုးစားပြီး စနိုက်ကြော်နေလို့ ဘုန်းဘုန်းရေ..''
(၇၀)ကျော် မော်ဒယ်အဖွားကြီးရဲ့ စကားကြောင့် စာရေးသူလည်း "ဗျား'' လို့ တစ်ခွန်းပဲ အသံထွက်နိုင်ပါတယ်။
"မဗျာနဲ့ ဘုန်းဘုန်းရေ ဒီမှာကြည့်ပါအုံး"
လို့ ပြောပြီး သူ့ဒကာကြီးနဲ့ စနိုက်ကြော်တို့ ပုံတွေကို
"ရတယ် ရတယ် ဒကာမကြီး မပြနဲ့တော့ ရတယ်"
လို့ တားလိုက်ပြီး၊ ကိလေသာမီး တောက်လောင်နေတဲ့ ဒကာမကြီးကို တရားနည်း ဘုရားနည်းနဲ့ မီးငြိမ်းဖို့ တရားစခန်းဝင်ဖို့ အကြံပေးလိုက်ပါတယ်။
''အမလေး တရားစခန်းကို လင်မယားနှစ်ယောက်စလုံး
ဝင်ပါသကောဘုရား...။ (၇) ရက်တရားစခန်းမှာ နှစ်ရက်နဲ့ပြန်လာတာ''
''ဘယ်လိုဖြစ်ပြီး နှစ်ရက်နဲ့ ပြန်လာတာလည်း ဒကာမကြီးရဲ့''
''ဘယ်လိုဖြစ်ပါ့ဘုရား စနိုက်ကြော်တွေကြောင့်ပေါ့ဘုရား၊ ရိပ်သာမှာ ထမင်းကျွေးတော့ ထမင်းကျွေးတဲ့နေရာမှာ တာဝန်ယူတဲ့ ကောင်မတွေကတပည့်တော် အိမ်ကဟာကို ဟင်းထည့်ပေးတာ အမြင်ကပ်လို့
မော်ဒယ်အဖွားကြီး စကားကိုကြားတော့မှ ဒီဒကာမကြီးရဲ့ အနေထားကို သဘောပေါက်သွားတယ်။
''တရားဖက်ရမယ့် အရွယ်မှာ တဏှာမက်'' နေတော့ စိတ်ထဲမှာလည်း အတော်လေး အချဉ်ပေါက်သွားတယ်။
ဒါကြောင့် စချင်စိတ်လည်း ပေါက်လှတာမို့ ခပ်တည်တည်နဲ့ စာရေးသူရဲ့ ဟန်းဖုန်းကိုထုတ်ပြီး..
''ကဲဒကာမကြီး မယားကြီးရှိပါရက်နဲ့ စမောဆွဲတဲ့ ဒကာကြီးကို တလင်တမယား ဥပဒေနဲ့ တရားစွဲချင်တာမို့လား၊ ခု ရန်ကုန်တိုင်း ရဲမှူးဆီကို ဖုန်းဆက်ပြီး ဒကာကြီးကို ဖမ်းခိုင်းလိုက်တော့မယ်''
ဟု ခပ်တည်တည်နဲ့ စလိုက်ပါတယ်။ ဒီတော့ မော်ဒယ်အဖွားကြီး ထိပ်ထိပ်ပြာပြာနဲ့
'' မ...မဟုတ်ပါဘူးဘုန်းဘုန်းလေးရယ်။ တပည့်တော်က ဘုန်းဘုန်းလေးတရားကို Sky Net ကနေ နာပြီးကတည်းက ကြည်ညိုပြီး ဖူးချင်နေတာပါဘုရား။
ခုက ဒကာကြီးကို လာတိုင်တာ မဟုတ်ပါဘူးဘုရား ဘုန်းဘုန်းလေးကို လာဖူးတာပါဘုရား. . .''
လို့ ပြောပြီး ပိုက်ဆံ(၁၅၀၀)ကို ဇွတ်လှူနေတာကြောင့်
''ဦးဇင်း ငွေလက်မခံဘူး'' လို့ ညင်းလိုက်ရပါတယ်။
အဖွားကြီးရဲ့ ဖြစ်စဉ်ကို ကြည့်ပြီး စနောက်ချင်စိတ်က ပေါက်လာပြန်တာမို့။
''ပေးပါဘုရား ဘုန်းဘုန်းလေးတို့ ပညာရှိကပေးတဲ့ အကြံကို တပည့်လေး လိုက်နာပါ့မယ်ဘုရား''
''ခု ဒကာကြီးကိုက စမောတွဲတာကို ဒကာမကြီးက အူတိုနေတာမို့လား၊ ဒီတော ဒကာကြီးကို ပြန်ပြီးအိုတိုအောင် ဒကာမကြီးလည်း ပြန်ပြီး စမောဆွဲလိုက်ပေါ့''
မျက်လုံးတွေ လင်းလက်လာပြီး ။
'' ဟုတ်တယ်ဘုန်းဘုန်းလေးဘုရား... တပည့်တော် အဲ့လိုလုပ်ဖို့မေ့နေတာ၊ အဲ့လိုလုပ်မယ် စမောဆွဲမယ် စပါယ်ယာကော ဒရိုက်ဘာပါဆွဲတော့မယ်'' ဘုရားလို့
'' ဒါပေမယ့် တစ်ခုတော့ရှိတယ်ဘုန်းဘုန်းရဲ့ ဘုန်းဘုန်းတပည့်တော်ကို ဆက်ကူညီပေးအုံး''
''ဒီလိုလေ ဘုန်းဘုန်းလေးရဲ့ ခုခေတ်ကောင်လေးတွေက လွယ်တာမဟုတ်ဘူး။
တပည့်တော်က အိမ်ကမျက်နုကြိုက်ကြီးကို မခံချင်လို့
အူတိုအောင် တွဲလိုက်တာတော့ ဟုတ်ပါတယ်။
ကိစ္စတွေပြီးလို့ တပည့်တော်ကို မခွဲနိုင်ဘူးဆိုရင်ခက်မယ်ဘုရား၊ နောက်ပြီး ပစ္စည်းဝယ်ပေးရ ၊ အဝတ်စားဝယ်ပေးရ၊ မုန့်ဖိုးပေးရနဲ့
''အဲ့ဒီတော ကျုပ်က ဘယ်လိုကူညီရမှာလဲ'
စာရေးသူ စကားဆုံးတော့ စာရေးသူဘေးနားမှာ ထိုင်နေတဲ့ ကျောင်းသား(၃)ယောက်ကို မေးငေါ့ပြပြီး။
''ဟိုလေ ဘုရား.. ဘုန်ုးဘုန်းလေးဆီမှာ ဦးဇင်းလူထွက်လေး ဘာလေးရှိလားဘုရား''
''ရှိတယ်လေ ခု ဦးဇင်းနား ထိုင်နေတဲ့ (၃)ယောက်က
ဘုန်းကြီးလူထွက်တွေချည်းပဲ၊ ဒကာမကြီး စမောဆွဲမှာ သူတို့နဲ့က ဘာဆိုင်လို့လဲ''
တပည့်တော် စမောဆွဲချင်လို့ပါဘုရား... အလကားမဆွဲ ပါဘူးဘုရား တရက်ကို(၁၅၀၀) ပေးမှာပါ၊ သူတို့လည်း အလုပ်ရ တပည့်တော်အတွက်လည်း အဆင်ပြေတာပေါ့ဘုရား''
မော်ဒယ် အဖွားရဲ့စကားလည်းကြားရော... ဘုန်းကြီး လူထွက်(၃) ယောက်မှာ။
'' ဟာ...ဟာ...ကျုပ်တို့က ခဏလေး လူထွက်တန်း ကစားနေတာပါ၊ ခဏနေရင် ပြန်ဝတ်တော့မှာပါဗျား၊
လို့ ကြောက်လန့်တကြားအော်ပြီး ကျောင်းပေါ်က ဆင်းပြေးသွားပါတော့တယ်။
''မနက်ဖြန် ပြန်လာခဲ့မယ်ဘုရား'' လို့ အကြိမ်ကြိမ်ပြော ပြီး မော်ဒယ်အဖွားပြန်သွားပါတယ်။
အမြန်စုံး သင်္ကန်းပြန်ဝတ်ပေးပါဘုရား၊ ညနေက အဖွားကြီးကို ကြောက်လို့ပါ အမြန်သင်္ကန်း ပြန်ဝတ်ပေးပါဘုရား'' ဟု
စမောဆွဲလိုသူ၊ စနိုက်ကြော်လိုသူ ''ဘုန်းကြီးလူထွက် တစ်ရက်(၁၅၀၀) နဲ့ ငှားလိုသူများ စာရေးသူထံ ဆက်သွယ်ကြပါကုန်.........
ဤပိုစ်ကို တင်ခြင်းအားဖြင့် စာမေးပွဲကျ၍ လူထွက်ချင်နေသော နောင်တော် ညီတော်များ...
မူရင်း ''ဓမ္မဝီရ အရှင်''
တနင်္သာရီတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ လာဘ်ပေး၊ လာဘ်ယူမှု ပြုလုပ်နေမှု နိုင်ငံတော်အစိုးရသိစေရန် ============================
တနင်္သာရီတိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဒေါ်လဲ့လဲ့မော်ရဲ့ ဖေ့ဘွှတ် စာမျက်နှာမှ
ယနေ့နံနက် ၁၀း၄၀ တွင် Myanmar Rock Mountain Co.,Ltd. မှ မန်းနေးဂျင်းဒါရိုက်တာ ဒေါ်သူသူမြင့်နှင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ
အဖွဲ့ချုပ်စည်းရုံးရေးမှူး ဦးစိုးမိုးအောင် တို့ မှ တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း
လိုအပ်သည်များကို အသုံးပြု နိုင်စေရေးအတွက် ငွေကျပ် (သိန်း ၅၀ ) လာရောက် လှူဒါန်းသွားပါသည် ဟု ရေးသား တင်ပြထားပါတယ် ။
အောက်ပါ ငွေကြေးသိန်း ၅၀ ကျပ်ကို M-R-M ( Co.,Ltd )ဒါရိုက်တာ ဒေါ်သူသူမြင့် + nld စည်းရုံးရေးမှူး ဦးစိုးမိုးအောင် တို့က တနင်္သာရီတိုင်း
ဒေကြီး လိုအပ်သည်များ အသုံးပြုရန်ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်တခု တပ်လိုက် ကတဲ့က ဒါဟာ လာဘ်ပေးလာဘ် ယူမှုကို ဖုံးကွယ် လိုက်တဲ့ ခေါင်းစဉ်တခုသာ ဖြစ်ကြောင်း သိသာထင်ရှားလှပါတယ်
ဇနီးလုပ်သူက ( Co.,Ltd ) ရဲ့ မန်နေဂျင်း ဒရိုက်တာတစ်ယောက် မိမိကိုယ်တိုင် က nld ပါတီက စည်ရုံးရေးမှု တိုင်းဒေသကြီးလိုအပ်ချက် မိမိကိုယ်တိုင်သိနှင်း နေပြီးသားဖြစ်တဲ့ nld ပါတီဝင်တစ်ယောက်က တိုင်းဒေသကြီး အတွင် လိုအပ် သည်များ အသုံးပြုနိုင်စေရန် ဆိုပြီး
၀န်ကြီးချုပ်လက်ထဲကို ငွေကျပ်သိန်း ၅၀ ကို သွားရောက် လှူဒါန်းပါတယ်
လို့ ဆိုလိုက်ကတဲ့က နိုင်ငံတော်က အစိုးရ ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုကို ဘာမှရေရာမှု မရှိတဲ့ အလှူဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်ပြောင်းတပ်ပြီး ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှု ပြုလုပ်နေခြင်းသာ ဖြစ်ပါကြောင်း မြင်တွေ့နေရပါသဖြင့်
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးထင်ကျော် နှင့် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သိစေရန် လေးစားစွာဖြင့် တင်ပြအပ်ပါတယ် ခင်ဗျာ
ပျောက်ဆုံးသမီးပျို ( ၂ )ဦးအား MAT နှင့် မြန်မာလူကုန်တားတပ်ဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းကယ်တင် +++++++++++++++++++++++++++++++++++
၂၀၁၆ ၊ ဇွန်လ ၂၉
ဘန်ကောက်အခြေစိုက် ထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားများအဖွဲ့ MAT သည် ဇွန်လ ၁-ရက်နေ့ညဉ့် က ရန်ကုန်မြို့ အင်းစိန် ရွှေဝါ၂လမ်း အိမ်အမှတ် (၁၄၃) တွင် စင်္ကာပူနိုင်ငံသို့ ပို့ဆောင်ရန်အတွက် တရားမ၀င် စုဆောင်းထားသည့် စစ်ကိုင်းတိုင်း တမူမြို့မှ အမျိုးသမီး ၁၈ ဦးကို ရန်ကုန်တိုင်း လူကုန်တားတပ်ဖွဲ့မှူး ဦးရဲဝင်းအောင် ၏ အကူညီဖြင့် စုံစမ်းဖေါ်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။ အလားတူ ယခုလအတွင်း ချင်းပြည်နယ်မှ မလးရှားသို့ လူကုန်ကူးသူ ၂ဦးကိုလည်းပူးပေါင်း ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့သည်။
အီးယူနှင့်အမေရိကန်တို့ လူကုန်ကူးမှုအဆိုးဆုံးစါရင်းတင်သွင်းခြင်းနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံ မှ ကျွန်ပြုခံ အလုပ်သမား၏ လုပ်အားဖြင့် ထုတ်လုပ်သည့် ပင်လယ်အစားအစာများ ကို စုံသုံးရန်ပိတ်ပင်ခြင်းမှာ မှန်ကန်သည်ဟု ဆိုနိုင်သော်လည်း လူကုန်ကူးမှုသားကောင်းဖြစ်ရသည့်
အစိုးရကိုဖိအပ်တစ်ရပ်အနေဖြင့် သတ်မှတ်ခြင်းကသပ်သပ်ဖြစ်သင့်ပြီး အရာရာ ချို့ငဲ့နေသည့် မြန်မာလူကုန်တားရဲတပ်ဖွဲ့အား (လူအင်အားဖြည့်တင်းခြင်း၊ နည်းပ ညာနှင့်
ထောက်ကူပစ္စည်းများပံ့ပိုးခြင်းများအပြင် စရိတ် စကများ)အပြည့်အ၀
ကူညီပေးခြင်းများ ပြုလုပ်သင့်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည်ထိုင်းနိုင်ငံကဲ့သို့
မြန်မာနိုင်ငံသားများ လူကုန်ကူးမှု ကိုဖြစ်ပေါ်စေသော
၈၀ ရာခိုင်နုန်းကျော်သော တောနေလူတန်းစား တောင်သူလယ်သမား များအတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ မဖန်တီးပေးနိုင်ခြင်းသာမက လယ်ယာမြေများနှင့် မြစ်ချောင်းအင်းအိုင်များကို အာဏာပိုင်များ နှင့် နီးစပ်သည့် ခရိုနီများက သိမ်းပိုက်ကြခြင်းများကြောင့် အဓိကဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အလုပ်လက်မဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုမဲ့ကာ ရေကြည်ရာမျက်နုရာကို ထွက်ခွာဖို့ တွန်းအားဖြစ်စေသည်။နေရပ်ရင်းတွင်ဆက်လက်အသက်ရှင်
ထို့အပြင် ပညာတတ်လူတန်းစားများအတွက်လည်း ဘ၀ရပ်တည်ရေးအတွက် လုံလောက်သည့်လစာဖြင့် အလုပ်အကိုင်များမရရှိနိုင်ခြင်းတို့ကြောင့်
မြန်မာနိုင်ငံမှ အရွယ်ရောက်ပြီးသူတိုင်း ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ ရရာလမ်းမှ ထွက်ခွာနေကြခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဦးကျော်သောင်း ကသုံးသပ်ပြောဆိုသည်။
NLD အစိုးရသစ်အနေဖြင့် မြန်မာအများစုလူကုန်ကူးခံနေကြရသော တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတို့တွင် သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံ လူကုန်တားတပ်ဖွဲ့များနှင့် အလျှင်အမြန် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် လူကုန်တားရဲအရာရှိများခန့်ထားရန် အလျှင်အမြန်
စီစဉ်ဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်း MAT အဖွဲ့ကအကြံပြုပြောဆိုသည်။
via # ကျိုက်မရော မုဒုံ
အိုင်အက်စ်လက်မှ ဖော်လူဂျာကို သိမ်းပိုက်ပြီးနောက် မ...
ဆိုင်ကယ်အရှိန်မထိမ်းနိုင်ဘဲ လမ်းဘေးတွင် ရပ်ထားသော ...
ဦးခေါင်းမှာ ပေါက်တူးနဲ့ ထုတဲ့ ဒါဏ်ရာအပြင် ဓားဒါဏ်...
ဇနီးဖြစ်သူအား ဓါးမြှောင်ဖြင့်(၅)ချက် ထိုးသတ်ခဲ့မှု...
မြန်မာငွေ ကျပ် ၃၀၀၀ ကျော်နဲ့ရောင်းချမည့် စမတ်ဖုန်း...
နုတ်ထွက်စေချင်ကြပါက နုတ်ထွက်ပေးသွားမည်ဟု မန္တလေးမြိ...
၁၀ တန်းကျောင်းသူလေးတစ်ဦး ဘဝကို အရှုံးပေးသွား -----...
ဆိုင်ကယ် မောင်းကျွမ်းပါသည်ဟုသော စတန့်မင်းသားတွေသနာ...
ဘုန်းကြီးလူထွက် ငှားချင်လို့ပါ -------------------...
တနင်္သာရီတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ လာဘ်ပေး၊ လာဘ်ယူမှု ပြုလုပ်...
ပျောက်ဆုံးသမီးပျို ( ၂ )ဦးအား MAT နှင့် မြန်မာလူ...
နောက် မဆတ်ဆံချင်တော့ပါ KBZ Bank ရယ် --------------...
အခု online မှာ ပြန့်လာတဲ့ … NLD ပါတီက လွှတ်တော်အမတ်...
လျှပ်စစ်ရထား ပြေး ဆွဲ မှု ကို ဇူ လိုင် ၁ ရက် မှ စ ၍...
@@@ #လူတစ်ယောက်၏တန်ဖိုး @@@ ----------------------...
သူခိုးဟု စွပ်စွဲ၍ ထိုးကြိတ်ရိုက်နှက်ပြီး ဖုန်းဆိုင...
ယနေ့နံနက် ၇နာရီအချိန် မိုးလေ၀သထုတ်ပြန်ချက်
ရတနာထွန်း ရေသန့် စက်ရုံကိုစစ်ဆေးခြင်း
ဈေးပေါတဲ့ အိန္ဒိယ စမတ်ဖုန်း၊ အမှန်အကန်လား အကြံအဖန်...
ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကဒုက္ခသည် အရေး သတင်းထုတ်ပြန်
အခြေခံလခစားတစ်ယောက်ရဲ့ ကုန်ကျစရိတ် ဆိုပဲ... ပိုငွေ...
ဇေကမ္ဘာ ဦးခင်ရွှေနှင့် သူရဦးအောင်ကို ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်း...
ဂျာမနီရောက် ဒုက္ခသည်တစ်ဦး ဒေါ်လာ တစ်သိန်းခြောက်သောင်...
ညလုံးပေါက်ခိုင်းပြီး လုပ်ခမပေး၍ ထိုင်းအလုပ်ရှင်ကို...
အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ လာဘ်စားလျှင် ခုံရုံးဖွဲ့ စစ်ဆေ...
ဒေါ်စု နှင့် အပေါင်းအပါတစု မပြောရဲသော အမှန်တရား ကိ...
၃လမ်းသွား လမ်းမကြီး တစ်ခုလုံး ပြည့်အောင် ၃ ထပ်ပိတ်...
လိုင်စင်မရှိတဲ့ စားသုံးဆီ ရောင်းနေ သူတွေကို အရေးယူ...
ထိုင်းအရာရှိတွေ အရေးယူခံရတဲ့ ကိစ္စ နိုင်ငံတော်အတိုင...
လုပ်ခမပေးဘဲ ပိုင်ရှင်တိမ်းရှောင်သည့် ယူနီပိုလာအထည်...
ပင်လုံညီလာခံဖြစ်ရေး တပ်မတော်က ပူးပေါင်းပါဝင်မည်
ဇွန်လ (၃၀) ရက်နေ့ ထုတ် Pyimyanmar Journal No 1030
ဆီဖြည့်နေစဉ် ကားတွင်းဖုန်းစကားပြောနေရာမှ ပေါက်ကွဲမ...
တက္ကစီငှားပြီး ဒရိုင်ဘာကို ဓားထောက်လုယက်ရန် ကြံစည်သ...
ဖျာပုံမြို့က (၈)တန်းကျောင်းသူ မိန်းကလေး(၅)ဦးကို လ...
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးထင်ကျော်နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံ ဒုတ...
မုဆိုးမ ဥပမာ ။ *************
ငါးစင်ရိုင်းအိုးကပ် ချက်နည်း ••••••••••••••••••••
ဂျီစပေါ့ တကြော့ပြန်လာပြီ (ဒေါက်တာတင့်ဆွေ) အသက် ၁၈ ...
အသက် ၁၂ နှစ်မပြည့်ခင်အထိ အမျိုးသားတွေမှာ မျိုးပွား...
ရောဂါလက္ခဏာ အနေနဲ့ကတော့ ဖျားမယ်၊ ချောင်းဆိုးမယ်၊ အသ...
ပြည်တွင်းစစ်ကြောင့် ကိုယ်လက်အင်္ဂါ ဆုံးရှုံးသွားသူမျာ...
ထိုင်းနိုင်ငံရောက် ညီမလေးသို့... =================...
မိုင်းယန်းမြို့မ စခန်းမှူး တရားခံ ဖမ်းဆီးစဉ် အိမ်ေ...
တဦးချင်းမှတ်ပုံတင် ITC ကတ်ဖြင့် မော်တော်ဆိုင်ကယ်တ...
ဒက္ကားမြို့မှ ဆရာတော်ကြီးအား သတ်ပစ်မည်ဟု အစ္စလာမ်မစ်...
အမှည့်မြန်အောင် ဓါတုဆေးရေများ သုံးနေသည့် သရက်သီး ဒ...
နိဗ္မာန်ယာဉ်လိုင်စင်တပ် မော်တော်ယာဉ်ဖြင့် တရားမ၀င် ...
ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင်လုံ သြဂ...
အစ္စတန်ဘူးလ်မြို့ Ataturk လေဆိပ်တွင် အသေခံဗုံးဖောက်...
ကျပ်သုံးသိန်း လာဘ်ယူသည်ဟု စွပ်စွဲခံရသည့် မန္တလေးမြိ...
ကိုယ်ပိုင်အိမ် အဆင့်မြှင့်ရန် သုံးခဲ့သော ပြည်သူ့ဘဏ္ဍ...
ထားဝယ်ခရိုင် ရေဖြူမြို့နယ် သစ်တိုထောင့်ရွာ၌ ကျောင်...
တပ်ချုပ်နှင့် အပစ်ရပ် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုက် ၈ ...
ဖားကန့်ကျောက်တောင်ကမ်းပါးပြိုကျမှုမှ အလောင်းများ ပြ...
ထူးအိမ်သင်ရေးသား၊ သီဆိုခဲ့သော သီချင်းများကို တစ်စု...
‘‘တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ ရုပ်ရှင်ရုံ ၁၀၀ ကို တစ်ပုံစံတည...
Facebook မှာအသစ်ရောက်လာမဲ့ Facebook Slideshow feat...
လွတ်လပ်စွာ သတင်းရေးသားခွင့်ဟု ဆိုရာဝယ် ===========...
သိသင့်တယ်ထင်လို့ပါခင်ဗျ……… ကမ္ဘာ့မွတ်စလင် လူဦးရေမျ...
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အရာရှိတစ်ဦး ပြောသည့်စကား အပြည်...
ပြည်ပ မှ ပေါက်ဖော် လောပန်းမ ငယ်ငယ် ချောချောလေးတွေ...
"ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေ အတွက် လျှို့ဝှက်ရည်မ...
ပိုမိုဆိုးရွားလာတဲ့ Android virus ♫
နမ္မတူမြို့နယ် အတွင်းရှိ RCSS/SSA အား အစိုးရတပ်မတော...
ကိုလံဘီယာ တွင် စစ်ရဟတ်ယာဉ် ပျက်ကျမှု ကြောင့် ၁၇ ဦး...
NLD ဗဟိုကော်မတီက ရွေးချယ်လိုက်သည့် ပြည်ထောင်စုအဆင့...
အရှေ့တောင်အာရှဒေသ၏ အိုင်အက်စ်အဖွဲ့ငယ် ဖိလစ်ပိုင်တေ...
အတန်တန် သတိပေးနေတဲ့ကြားက စောက်မှတ်မရှိတဲ့အမိုက်မ.....
ဗြိတိန်တွင် ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့ဆန္ဒခံယူပွဲ ကျင်းပရန...
မအိပ်မနေ အလုပ်လုပ်သူများ ဦးနှောက်ရင့်ရော်မှု မြန်ဆ...
လူငယ်ချင်းစကားများရာမှ ဓားများဖြင့်ဝိုင်းခုတ်၍ တစ်...
မိခင်က သားမိုက်အရင်းကို ထင်းခုတ်ဓါးမဖြင့် ခုတ်သတ် ...
ထိုင်းနိုင်ငံ ဖတ္တရား ကမ်းခြေမှာ ဂျာမန် နိုင်ငံသား ...